Qarax miino oo lala Beegsaday Gudoomiye ku Xigeenka Dedmada Hiliwaa – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya nawaaxiga Shaneemo Cabdi Waayeel ee Degmada Heliwaa, ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax miino oo lala eegtay Sarkaal ka tirsan Maamulka Degmada Heliwaa.
Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, ayaa wararka waxa ay sheegayaan in lala eegtay gaari uu saarnaa Gudoomiye Ku xigeenka dhanka ammaanka Degmada Heliwaa Abshir Kaaraan.
Gaarigii uu watay Gudoomiye ku xigeenka markii uu dhaafay meesha miinada ku aasneyd ayeey qaraxday, miinada waxaana la sheegay wax khasaare ah inuusan ka dhalan.
Saraakiisha ammaanka Degmada Heliwaa, ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uusan waxba khasaare gaysan.
Ciidamada dowladda oo goobta tagay ayaa waxa ay sameeyeen baaritaan waxa ayna soo qabteen tiro dhalinyaro oo ay ku tuhmayaan inay miinada qarxiyeen.
Nawaaxiga Shaneemo Cabdi Waayeel ee Degmada Heliwaa, ayaa xilliyada qaar sidan oo kale waxaa uga dhaca qaraxyada miinada ah ee Shabaab ay sheegtaan masuuliyadooda.